घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » क्लासिक वास्तुकला प्रेमीहरूको लागि शीर्ष गन्तव्यहरू
चाहे तपाईं एक पेशेवर वास्तुकार हुनुहुन्छ जसलाई केहि प्रेरणाको खाँचो छ वा क्लासिक भवनहरूको निर्माणमा गएको कलाको लागि तपाईंलाई ठूलो माया र जोश छ, त्यसोभए संसारभरका धेरै गन्तव्यहरू छन् जुन तपाईंसँग छ। अनुभव र अन्वेषण गर्न। जब तपाईं गर्नुहुन्छ, तपाईंले हतारमा बिर्सनुहुने कुराहरूमा तपाईंको आँखाहरू भोज गर्न निश्चित हुनुहुनेछ।
क्लासिक वास्तुकला प्रेमीहरूको लागि विश्वको शीर्ष पदनामहरू फेला पार्न, पढ्न निश्चित गर्नुहोस्।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थल, स्पेनको जेन क्षेत्रमा पाइन्छ, पक्कै पनि क्लासिक पुनर्जागरण शैलीमा बनाइएका भवनहरूका प्रेमीहरूको लागि भ्रमणको लायक छ। यो शैली, एक पटक स्पेनमा सामान्य थियो, अब सबै लोप भइसकेको छ, तर यसले शहरको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म सडकहरू भर्छ, यसको मतलब तपाईं यसबाट कहिल्यै टाढा हुनुहुन्न।
अन्डालुसियाको गेटको रूपमा काम गर्दै, एउटा गेट जुन अद्वितीय जैतूनका रूखहरूको समुद्रले भरिएको छ, कम छैन, यो भ्रमणको लागि उत्तम ठाउँ हो यदि तपाईं स्पेनको अछुतो, अपराजित इतिहास हेर्न र अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने। यसको जुम्ल्याहा गाउँ, Baeza, केवल 10 किलोमिटर टाढा अवस्थित, पनि नराम्रो छैन!
सेन्ट पीटर्सबर्ग, रूस
क्लासिक वास्तुकलाका प्रेमीहरूको लागि यो पृथ्वीमा सेन्ट पीटर्सबर्ग भन्दा राम्रो ठाउँ हुन सक्छ। यहाँ, तपाईंले आफूलाई रोकोको आन्दोलनमा धेरै डुबेको पाउनुहुनेछ, एक स्टाइल जुन फ्रान्समा 18 औं शताब्दीमा प्रख्यात भएको थियो तर चाँडै यो रूसको बाटो फेला पर्यो। रोकोको फेसनमा स्टाइल गरिएका सेन्ट पिटर्सबर्गका भवनहरूमा पहेंलो रङहरूसँगै बाक्लो वक्रहरू छन्। यदि तपाइँ एक पेशेवर वास्तुकार हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको अर्को डिजाइन कार्य को सम्बन्ध मा केहि ईश्वरीय प्रेरणा संग यो शहर छोड्न निश्चित हुनुहुनेछ।
नैरोबी, केन्यामा त्यहाँ संसारको उत्कृष्ट बाँकी रहेको 'अंग्रेजी देश' घरहरू मध्ये एक पाउन सकिन्छ। द भव्य जिराफ मनोर घर जो कोही आउन र हेर्न को लागी खुला छ। वास्तवमा, कोही पनि आउन र यसमा बस्नको लागि यो खुला छ! यहाँ बस्दा, तपाईंले 1930s औपनिवेशिक युगमा फर्किने हजारौं कथाहरू बताउने वास्तुकला मात्र देख्नुहुनेछैन, तर तपाईंले घरको रमणीय ल्यानहरूमा विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुहरू हिंडिरहेको पनि देख्नुहुनेछ। तपाईंले सायद पहिले नै अनुमान गरिसक्नुभएको छ, तपाईंले जिराफहरूको आफ्नो निष्पक्ष हिस्सा भेट्नुहुनेछ, तर जिराफहरूसँगै, तपाईंले वार्थोगहरू र मयूरहरू जस्ता धेरै सानाहरू पनि देख्नुहुनेछ।
स्पेनदेखि रसियासम्म केन्यासम्म, त्यहाँ विशिष्ट क्षेत्रहरू र भवनहरू फेला पार्न सकिन्छ जुन देख्दा, साँचो वास्तुकार प्रेमीहरूको दिमागमा आउने वर्षौंसम्म बस्नेछ। संसारभरि, सबै महाद्वीपहरूमा, त्यहाँ वास्तुकला पाउन सकिन्छ जुन समयको परिक्षामा खडा भएको छ र अब कला भएको छ। त्यसोभए, तपाईलाई त्यहाँ बाहिर जान र यो सबै हेर्नबाट के रोकिएको छ?